[Review] Top 5 Mặt nạ cấp nước tốt được chị em tin dùng nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Mặt nạ cấp nước tốt được chị em tin dùng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isikhathi sonyaka, kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani, ukunikezwa kwamanzi esikhumbeni kuhlale kuyindaba yokukhathazeka kwabesifazane abaningi. Phakathi kwabo, ukusetshenziswa imaski yamanzi iyisinqumo sokuqala ngenxa yobumnene bayo kodwa imunca umswakama ophezulu kakhulu kanye nemiphumela yokugcwalisa. Ngakho-ke, uma udinga ukuthenga uhlobo imaski Fit. Landela izinhlobo ezi-5 eziphezulu zamamaski asekelwe emanzini emakethe engezansi.
1 Iyini imaski yamanzi? Izinzuzo ze-hydrating masks esikhumbeni
2 Imibandela yokukhetha imaski efanelekile yokuhlinzeka ngamanzi
2.1 Uhlobo Lwesikhumba
2.3 Imiphumela ehambisanayo
2.4 Uphawu lokuhweba
3 Izinhlobo ezi-5 eziphezulu zamaski amanzi ezethenjwa kakhulu abesifazane namuhla
3.1 1. I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule Mask Ex Thuthukisa imaski yokuhlinzeka ngamanzi athambile
3.2 2. I-BNBG Vita Genic Hydrating Jelly Mask Vitamin
3.3 3. I-Naruko Rose & Botanic HA Aqua Cubic Hydrating Mask EX kufanele isetshenziswe
3.4 4. I-Laneige Water Sleeping Mask Premium
3.5 5. I-Neutrogena Hydro Boost 3d Sleeping Mask Top
4 Iziyalezo zendlela yokusebenzisa imaski yamanzi enembe kakhulu futhi esebenza ngempumelelo
Iyini imaski yamanzi? Izinzuzo ze-hydrating masks esikhumbeni
Imaski yokuhlanza amanzi iwumkhiqizo wemaski ogcwalisa futhi uthuthukise okuqukethwe kwamanzi esikhumbeni sakho ukuze kube nokukhanya okunempilo. Ngaphezu kwalokho, imaski iwumkhiqizo okhethekile wokunciphisa ukuphelelwa amanzi emzimbeni, isikhumba esomile, isikhumba esiqhekekile ngenxa yokuntuleka kwamanzi noma imithelela yemvelo kanye nesikhumba ngokwaso.
Emgqeni wamamaski asekelwe emanzini, ungabona ukusetshenziswa okuningi okunenzuzo okufana nalokhu:
Ukugcwaliswa kwamanzi okuhle kakhulu, okuvumela amanzi ukuthi angene ajule kumaseli kanye ne-epidermis ukuletha ukugcwala okukhulu esikhumbeni.
Nciphisa isikhumba esimahhadlahhadla, esixegayo nesomile, sisiza ukuthuthukisa isikhumba esibuthuntu, esimnyama esibangelwa ukuntuleka kwamanzi. Ukusuka lapho, iletha ukunwebeka nokuthambile okukhulu esikhumbeni somsebenzisi.
I-mask ye-hydrating izosiza isikhumba ukuba siphumule ngemva kosuku olukhathele, sikhuthaze ukukhiqizwa kwe-collagen namaseli amasha esikhumba esigcwele kakhulu.
Inkomba: Amamaski ama-collagen angama-5 aphezulu aseKorea ahamba phambili namuhla
Imibandela yokukhetha imaski efanelekile yokuhlinzeka ngamanzi
Hhayi imaski yamanzi Okuhle futhi kufanelekile esikhumbeni sakho. Ngakho-ke, ukuze uthole umkhiqizo olungile, kufanele usebenzise izindlela zokuthenga ezibalulekile ngezansi.
Abantu abaningi basacabanga ukuthi isikhumba esomile kuphela esidinga amanzi, kodwa lokho akulungile. Ngakho uma ukhetha imaski yamanzi, kufanele ukhethe ngokuvumelana nethoni yesikhumba sakho. Ikakhulukazi, esikhumbeni esomile, kufanele kunikezwe kuqala imikhiqizo enezithako ezifana nokwatapheya, utamatisi, inhlaba, njll. Esikhumbeni esinamafutha, okubaluleke kakhulu kunikezwa imaskhi yokuthambisa ukuze ulawule uwoyela….
Esinye isici esibalulekile lapho ukhetha ukuthenga imaski ye-hydrating uhlu lwesithako. Ngokusho kwabesifazane abaningi abanolwazi, kufanele ukhethe imaski efaka amanzi equkethe izithako ezifana ne-vitamin E, i-collagen, iphrotheni, i-HA… Kanye nezinye izinto ezikhishwe zemvelo ezifana notamatisi, ukhukhamba, i-aloe, izinyosi zezinyosi ….Qinisekisa umswakama owanele namanzi ngokushesha ugcwalise isikhumba.
Kunezinhlobo eziningi manje imaski yamanzi Abagcini nje ngokungeza amanzi esikhumbeni, kodwa futhi bengeza nezinye izinto eziningi ezisetshenziswayo. Ngakho-ke, uma unesikhumba esomile nesibuthuntu, kufanele ukhethe imaski ye-hydrating enemiphumela emhlophe eyengeziwe. Uma unesikhumba esinezinduna, ungakwazi ukubeka kuqala imikhiqizo ukusiza ukunciphisa izinduna futhi moisturize kahle.
Okokugcina, lapho ukhetha imaski ye-hydrating, kufanele ukhethe imikhiqizo evela kumikhiqizo emikhulu, eyaziwa kakhulu njenge-Laneige, i-Innisfree, i-Neutrogena …. Lokho kuzosiza ukuqinisekisa ukusetshenziswa okugcwele kanye nomswakama.
Izinhlobo ezi-5 eziphezulu zamaski amanzi ezethenjwa kakhulu abesifazane namuhla
Uma ufuna uhlobo imaski yamanzi Okuvelele futhi okuqinisekisiwe esikhumbeni, iziphakamiso ezilandelayo ezi-5 eziphezulu zizoba ezakho.
1. I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule Mask Ex Thuthukisa imaski yokuhlinzeka ngamanzi athambile
I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule Mask ingenye yemikhiqizo ejwayelekile ye-hydrating mask yamantombazane aseKorea. Umkhiqizo unamandla okuhlinzeka ngomswakama omuhle kakhulu, ukulawula amafutha kanye nokuqinisa ama-pores. I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule futhi ingumugqa wemaski othengiswa kakhulu eminyakeni yamuva yenkampani. I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule Moisturizing Mask enokwakheka okugxilile, i-essence inokugxila okuphezulu kunokokubili iSerum ne-Essence.
I-Mediheal NMF Aquaring Ampoule Mask iqukethe izithako eziningi zemvelo ezinenzuzo esikhumbeni njenge-NMF ehlanganiswe ne-Hyaluronic Acid, i-Ceramide, i-Adenosine, njll., ngaleyo ndlela isiza ukugcwalisa nokuthambisa isikhumba amahora amaningi. Ngokukhethekile, i-hyaluronic acid iyisisekelo esibalulekile ekunikezeni amanzi kanye nokuthambisa isikhumba. Izithako ezikhishwe kumakhowe eMpumalanga Yurophu zinemiphumela yokulwa nokuguga, ziqinisa isikhumba, futhi ziqinise izimbotshana. Ikakhulukazi, i-witch hazel iyasebenza ekwelapheni izinduna.
Intengo yesithenjwa: 30,000 VND/imaski
2. I-BNBG Vita Genic Hydrating Jelly Mask Vitamin
I-BNBG i-Vita Genic Hydrating Jelly Mask Vitamin E 30ml iyimaski efaka amanzi enezakhi zejeli ezigxilile. Ikakhulukazi amantombazane anesikhumba esomile noma isikhumba esivame ukusebenza endaweni enomoya opholile, okuholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni kanye nokuxebuka kwesikhumba. Umkhiqizo usiza ukwengeza u-Vitamin E ngokuqukethwe okungu-20,000ppm okhishwe emanzini amaminerali athathwe e-Jeju Island, e-Korea. Inikeza umphumela womswakama esikhumbeni esiphelelwe amanzi, isikhumba esigcwele isikhumba esicwebezelayo.
Ngaphezu kokusetshenziswa okungenhla, uhlobo lwe Imaski ye-Vita Genic hydrating Lokhu futhi kufanelekile kakhulu uma kusetshenziselwa isikhumba esinezibonakaliso ze-pigmentation noma ama-freckles. Imaski iqukethe izakhi eziningi zokulandelela ukusiza ukwandisa ukumelana kwesikhumba esinempilo, esihle futhi esibushelelezi. Ukuze kusetshenziswe ukuthuthukisa isikhumba esiphelelwe amanzi, esicwebezelayo ngenkathi silwa ne-oxidation, isikhumba esikhanyayo nokuthuthukisa ukuthungwa kwesikhumba ngokuphumelelayo. Uma ugcoba, uzozwa ukuphola njengomthombo wamanzi ongena ujule esikhumbeni ukuze “uchelele” isikhumba esomile esipholile.
Intengo yesithenjwa: 41,000 VND/imaski
3. I-Naruko Rose & Botanic HA Aqua Cubic Hydrating Mask EX kufanele isetshenziswe
I-Naruko Rose Kanye Ne-Botanic Ha Aqua Cubic Hydrating Mask Ex lUlayini wemaski wokuphakelwa kwamanzi waseTaiwan. Ngezithako ezikhishwe kuma-roses kanye ne-Hyaluronic Acid – i-asidi etholakala esikhumbeni somuntu enomthelela wokuhlinzeka ngamanzi, omswakama, osekela ngempumelelo inqubo yokulungisa umonakalo wesikhumba kanye nokuthuthukisa ikhono lemvelo lokuphulukisa. Ngokuhambisana nalokho yizithako ezisebenzayo ze-ceramides, i-adenosine, i-panthenol, … ezisiza ukuthuthukisa ubuhle besikhumba, futhi ngesikhathi esifanayo zivimbela inqubo yokuguga kwesikhumba.
Izingcaphuno ze-licorice, i-chamomile kanye namaqabunga etiye aluhlaza aqukethe amazinga aphezulu e-Catechin, i-Flavonoid, i-Polysaccharide, i-Amino Acids, i-Caffeine kanye nama-Vitamins… I-antibacterial, anti-inflammatory, isekela ukuqinisa izimbotshana, ukuthambisa nokuthambisa.Ithambisa isikhumba kanye nokunciphisa amabala ama-acne kanye nokubomvu. Ngaleyo ndlela kuvikela isikhumba emiphumeleni eyingozi yama-radicals mahhala kanye nokuvimbela ukuwohloka kwe-collagen ukwehlisa inqubo yokuguga esikhumbeni. Ukuthungwa kwemaski kufana nephepha, kuminyene impela futhi kunombala omhlophe oyi-milky. Ikakhulukazi ukuma kwe-mask kunebhande endlebeni ukusiza ukuphakamisa imisipha yesilevu nezihlathi ngenkathi usebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 25,000 VND
4. I-Laneige Water Sleeping Mask Premium
I-Laneige Water Sleeping Mask Lesi imaski ethandwa kakhulu yokulala yokuhlanza amanzi evela kumkhiqizo we-Laneige. Ngokukhishwa kwe-Hunza plum – isithako esisekela ama-anti-oxidants, sithuthukisa ithoni yesikhumba futhi ilethe ukukhazimula esikhumbeni esibuthuntu, esingaphili. I-brewer’s yeast extract isiza ukuqinisa ukumelana kwesikhumba, ivuselela ukwakheka kwe-collagen ukubuyisela amangqamuzana abuthakathaka abangela ukulimala kwesikhumba. Ikakhulukazi isithako samanzi eqhwa lase-Himalayan sisiza ukubopha amangqamuzana ukugcina umswakama kanye nokunciphisa ukuxebuka kwesikhumba.
Ngaphandle kwalokho, le maski yokuhlinzeka ngamanzi e-Laneige iphinde ibe ne-chestnut extract equkethe uvithamini C omningi. Inezindawo zokulwa nezinambuzane, ikhanyisa isikhumba, futhi isekela ukukhiqizwa kwama-keratinocyte amasha ku-epidermis futhi iqeda amangqamuzana esikhumba afile esikhumba esikhanyayo, esibushelelezi njenge isikhumba somntwana. I-Water Sleeping Mask inokwakheka kwejeli, ngakho imunca ngokushesha, isiza ukuhlinzeka ngamanzi amahle kanye nomswakama. Ngaphezu kwalokho, uma isetshenziswa esikhumbeni, uzobona ukupholisa okusheshayo nokuphumula okumbalwa kwe-hydrating masks enakho.
5. I-Neutrogena Hydro Boost 3d Sleeping Mask Top
I-Neutrogena Hydro Boost 3D Sleeping Mask iyimaski yokulala ene-hydrating yesikhumba esithambile, esiswakeme ubusuku bonke. Isithasiselo se-hyaluronic acid sinamandla aphezulu okuthambisa okugcina isikhumba sigcwele futhi sithambile njengesikhumba somntwana. Ukusebenzisa imaski yokulala ye-Neutrogena Hydro njalo kukusiza ukuthi ugcine ukunwebeka nokuqina kwesikhumba sakho njengaseminyakeni yama-20. Ikakhulukazi umkhiqizo ubuye ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, ezinconyelwe isikhumba esomile, isikhumba esiphelelwe amanzi kanye nesikhumba.
Ngaphandle kwesithako esisebenzayo i-HA, I-Neutrogena Hydrating Mask Iphinde ibe ne-lemon peel peel. Ngomphumela we-antioxidant, ivikela isikhumba ekulahlekelweni komswakama kanye nokwandisa ukumelana kwesikhumba emiphumeleni eyingozi yezinto zangaphandle zemvelo. Kuhlanganiswe neGlycerin ukuthuthukisa amandla okuthambisa isikhumba esithambile, esibushelelezi. Ukuthungwa kwemaski kusesimweni sokhilimu obukhulu, hhayi amafutha, hhayi okunamathelayo futhi awavimbi ama-pores. Ngemuva kokusebenzisa uzothola isikhumba sibushelelezi, sinwebeka futhi sithambile kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 295,000 VND
Iziyalezo zendlela yokusebenzisa imaski yamanzi enembe kakhulu futhi esebenza ngempumelelo
Ukusetshenziswa kwe imaski yamanzi Indlela efanele inethonya elikhulu ekusebenzeni kokunakekelwa kwesikhumba komkhiqizo. Ngakho-ke, uma usebenzisa lolu hlobo lobuso kufanele uhambisane nemiyalelo elandelayo.
Isinyathelo 1: Okokuqala, udinga ukuhlanza isikhumba sakho ngesikhiphi sezimonyo, isicoci esikhethekile. Ngaphezu kwalokho, exfoliate ne imvamisa izikhathi 1-2 / ngesonto.
Isinyathelo sesi-2: Bese usebenzisa i-toner ukuhlanza ngokuphelele ukungcola kanye ne-sebum ezimbotsheni futhi ulinganise i-pH yesikhumba.
Isinyathelo sesi-3: Faka imaski:
Ngemaski yephepha: Ungafaka imaski yephepha esiqandisini cishe imizuzu eyi-15, bese uyikhipha. Dabula futhi usebenzise ebusweni, thatha i-essence esele esikhwameni bese usakaza ngokulinganayo phezu kwe-mask noma indawo yentamo. Nethezeka cishe imizuzu eyi-15 bese ususa, ubambe kancane ukuze i-essence ingene ngokujulile esikhumbeni.
Ngezimbiza: Thatha inani elifanele le-mask futhi uligcobe ebusweni bakho, ugweme amehlo nomlomo. Lala futhi uphumule cishe imizuzu engu-15-20, bese ugeza ngamanzi futhi uqhubeke nenqubo yokunakekelwa kwesikhumba. Ngokuqondene ne-mask yokulala, ungayishiya ubusuku bonke futhi ugeze ubuso bakho ngakusasa ekuseni njengenjwayelo.
Nazi izinhlobo ezi-5 eziphezulu imaski yamanzi Okudume kakhulu nokwethenjwayo emakethe namuhla. Sethemba ukuthi lokhu kuzoba ulwazi oluwusizo futhi kukusize uthole futhi ukhethe imaski yamanzi efanelekile nephephile esikhumbeni sakho. Ukusuka lapho, thola isikhumba esisha, esikhazimulayo nesisha njengeminyaka yakho yamashumi amabili!
Xem Thêm Chia sẻ công thức làm trà sữa oreo cake cream tại nhà | Muasalebang
8 cách bắt Wifi không cần mật khẩu miễn phí trên điện thoại | Muasalebang